[Ukara] Mac iPhone Data Recovery: Recovery ehichapụ iPhone Data on Mac
Ụwa 1st Mac iPhone na iPad data mgbake software.
Naghachi iPhone data on Mac na ụzọ atọ.
Ike naghachi kọntaktị, SMS, na ndetu, oku na ndekọ, photos, video, wdg
Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ọhụrụ iPhone na Mac OS.
Gbalịa Ọ Free Gbalịa Ọ Free App Download
dr.fone Toolkit - iPhone data mgbake (Mac) bụ a dị ike na ngwá ọrụ dị irè maka Mac ọrụ iji weghachite furu efu iPhone data.
Na mberede ehichapụ ihe dị mkpa na gị na iPhone? Furu efu ma ọ nyawara gị iPhone? Ọ dịghị mkpa ka egwu! dr.fone Toolkit (Mac), gị Mac iPhone data mgbake ọkachamara, bụ ebe a na-enyere gị naghachi uru data na i chere na-ruo mgbe ebighị ebi furu efu.
N'ihi na ọnọdụ dịgasị iche iche
Nke a Mac iPhone data mgbake software na-arụ ọrụ n'ihi na ọtụtụ ndị nkịtị ndapụta.
Data efu mgbe factory weghachi
Data furu efu n'ihi iOS update
All banyere Atụmatụ
Ị nwere ike iji nke a Mac iPhone data mgbake ka iṅomi niile ehichapụ ma ọ bụ furu efu data gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod mmetụ, na ịhụchalụ nju maka free.
Ịchọrọ ibudata na wepụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara faịlụ? Nke a iPhone data mgbake software maka Mac na-ahapụ gị na-eme ya n'ihi na free. Gbalịa ya na ị ga-ama ya.
Anyị niile maara na Apple adịghị ekwe ka ndị mmadụ na-agụ ọdịnaya nke iTunes ndabere faịlụ, mgbe a Mac iPhone data mgbake software na-eme, na ọ bụ maka free.
Ọ bụ ihe karịrị a Mac iPhone data mgbake ngwá ọrụ. Mgbe ị na-ahụ gị data na Doppler N'ihi ya, ị nwere ike na-ịhụchalụ na ibipụta ọdịnaya mgbe ị nwere ndị dị otú a mkpa. Ọ bụ a onye-click ọrụ.
Nke a iPhone data mgbake software maka Mac na-enyere gị na-agbake data dị ka ozi kọntaktsị, foto, ndetu, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ihe ncheta, WhatsApp ozi, na ndị ọzọ, ruo 18 faịlụ na ụdị.
N'agbanyeghị na ị na-eji ọhụrụ iPhone 7, iPad Pro, ma ọ bụ ochie iPhone 4, iPad 1, a Mac iPhone data mgbake bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile ụdị nke iPhone, iPad na iPod aka.
Nke a iPhone data mgbake software maka Mac na-kpam kpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
3 Mac iPhone Data Recovery Ụzọ
Kpọmkwem iṅomi gị iPhone na a Mac iPhone data mgbake software ka ịhụchalụ na-agbake ehichapụ data bibiri.
Exract ka ịhụchalụ na bibiri naghachi ihe ị chọrọ n'aka gị iTunes ndabere faịlụ na Mac.
Download ma wepụ gị iCloud nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ka ịhụchalụ na bibiri naghachi ihe ọ bụla ihe ị chọrọ n'aka ya.
More na a Mac iPhone Data Recovery Software
Preview Dị: Tupu mgbake, ị nwere ike ịhụchalụ foto, video, ozi, kọntaktị, na ndetu, wdg
Mgbanwe Recovery: Ịchọpụta niile ma ọ bụ ụfọdụ ihe dị. Ị na-ekpebi ya.
Data Back to Device: Kpọmkwem ịzọpụta natara data gị iPhone enweghị overwriting ẹdude data.
100% Nchekwa Nkwa na: A na-agụ-na-Mac iPhone data mgbake ngwá ọrụ, ọ ga na-ma ọ bụ gbanwee ihe ọ bụla na gị iPhone.
Easy Jiri: Ọ dịghị kọmputa nkà jụrụ, onye obula nwere ike iji nke a iPhone data mgbake software maka Mac.
Complete iPhone Ndakọrịta
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac OS X 10.11 (El Captain), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10,8, 10.7, ma ọ bụ 10.6
iPhone Data Recovery maka Mac
Olee otú Dịghachi Call History na iPhone (iPhone 6s Plus / 6s So)
Olee otú Dịghachi ehichapụ foto site na iPhone (iPhone 6s Plus So)
Olee otú Dịghachi ehichapụ Video on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5C / 5 / 4S / 4
Olee otú iji weghachite WhatsApp Ozi na iPhone 6s / 6 / 5s / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Olee otú Dịghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ iPhone Ndi ana-akpo
Olee otú Dịghachi iMessages si iPhone (iPhone 6s Plus So)